Jennifer Lopez: Dumarka ayaa inta badan ka hor biya baxa Ragga - iftineducation.com
aadan21 / February 17, 2012
iftineducation.com – Inta badan dadka marka ay is weydiiyaan arintaasi waxaa durba kugu soo dhaceyso wacyiga dhabta ah ee ka jira sariirta ayadoona la rumeysanyahay in ragga ay hor biya baxaan sida qaarkiina ay rumeysanyihiin balse waxaan idiin hayaa arin ka gadisan sida aad wax u aaminsantihiin.
” Ma dareemi kartid xiligaasi oo waxad u egtahay sida ruux aan dunida joogin waxana aaminsanahay in dumarka ay ka hor biya baxaan ragga anigoo cadeyn u heli kara ” sidaas waxaa tiri Jennifer Lopez oo aad si wanaagsa u wada taqaan.
Jennifer Lopez oo soo guursatay ilaa dhowr jeer ayaa sheegtay in ay kaashaneyso qibradeeda waxa ayna sheegtay gaar ahaan iyada ay tahay dumarka ka hor biya baxa ragga waxa ayna sheegtay in dumarka oo dhana ay sidaa yihiin. Lopez ayaa dhanka kale carabka ku dhufatay in xaaladaasi ay tahay mid sii laba jibaarto dareenka ragga iyo dumarka ee xiisada ku bilowdo.
Daraasad kale ayaa sheegtay in ragga ay ka hor biya baxaan dumarka ayadoona daliil looga dhigayo ragga oo ah inta badan weerar qaadayaasha waana sababta keentay in ragga ay ka hor biya baxaan dumarka inta badan walow meesha iyana ay ku jirto kaalinta dumarka.
Maria Kity oo iyana ah 45-sano dhawaan dhashay cunugeedii 14-aad ayaa iyana dhanka haweenka u leexisay arinta ayadoona ay sheegtay in ugu horeyntii marka ay is helaan labada macaan ay dumarka sidaas ku helaan macaanka dhabta waxaana durba macquul ah in haweeneeda ay sidaa ku biyo baxdo sida aan ku arkay inta jeer ee wax soo dhalayay ” ayay tiri Maria oo xiligaasi ka qeyb galeysay barnaamij looga hadlayay arimaha bulshada oo ka baxayay TV BBC-da.
Markaan is barbar dhigo ku sameyno labadii daraasad ee ugu danbeysay ayaa waxa inoo soo baxaya in haweenka ay yihiin kuwa horeeya dhanka biya baxa ayadoona uusan ninka ogaan goorta ay biya baxday waxaana mudan ama wanaagsan in labada dhinac ay horay u sii socdaan si ay meesha uga bixin ciyaar wanaagii ka jiray daqiiqado ka hor.